Labozia fitaratra miloko lotus
Vokatra fitaovana: vera, matevina ary mahery.
Loko vokatra; mavokely, amber, esory fotsiny amin'ny lamba mando madio na ampio detergent kely hisorohana ny tara-pahazavana mivantana maharitra.
Fametrahana vokatra: efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fandraisam-bahiny, fianarana, apetraka eo an-joron'ny zorony dia fanaka an-trano tsara tarehy, mamorona rivo-piainana am-pitiavana.
Famolavolana vokatra: marefo ny sary sokitra, matevina sy miorina ny fotony, ary ny labozia dia tsy haingo fotsiny fa fomba fiaina koa.
Tavoahangy mason-tsakafo 750ml
Fanomanana sy fitehirizana sakafo:
Ny siny tonga lafatra hanomanana ny Saladinao amin'ny toeram-piasana na fitsangantsanganana isan-karazany, ary tsara ny mitazona ny sakafonao amin'ny sakafo mitovy amin'ny voaomana isan'andro isan'andro amin'ny herinandro
Afaka miambina ireo fitehirizana sy jellies tianao indrindra ary maro hafa.
Tavy fitehirizana fitaratra mangarahara 1000ml
♦ Fitaovana - Fitaovana fitaratra tsy misy firaka, madio sy mangarahara, mahasalama ary sariaka amin'ny tontolo iainana, afaka mamonjy toerana be dia be ho an'ny lakoziananao sy ny kabinetranao, amin'izay hahatratraranao ny fandaminana lakozia tsara kokoa;
♦ Ataovy madio sy tsy tantera-drano izy - Ny famolavolana vy tsy misy fangarony dia manatsara ny vokatra famehezana ny sakafo afaka mitazona ny sakafo ho madio sy tsy tantera-drano;
♦ Betsaka - Ny kaontenera fitehirizana sakafo any an-dakozia dia mety amin'ny fitehirizana kojakoja isan-karazany, ao anatin'izany ny vatomamy, ny voanjo, ny zava-manitra, ny oatmeal, ny serealy, ny biskitra, ny dite, vovo-dronono, paty, tsaramaso kafe, sns.
♦ Mampiasà fotoana - Azo ampiasaina amin'ny fivarotana mora, kafe, lakozia an-trano, sns., Be mpampiasa;
Kaopy mason 500 ml misy mololo
Tavoahangy vita amin'ny vera mazava tsara matevina miaraka amin'ny sarony vy sy mololo
Kaopy feno fikasana ho an'ny zava-pisotro mifangaro, voasarimakirana ary zava-pisotro mangatsiaka hafa
Mety amin'ny fampakaram-bady, trano fisotroana, trano, fety, na fiaraha-mikorana rehetra
Hevitra fanomezana lehibe ho an'ny namana sy fianakaviana